कोरोना : कति संक्रमण कति मृत्यु ? - Parichay Network
कोरोना : कति संक्रमण कति मृत्यु ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 ११ चैत्र २०७६, मंगलवार १०:३६ मा प्रकाशित
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पूरै विश्व प्रभावित भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अुनसार १८६ देश कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भइसकेका छन्।
यो भाइरसको संक्रमणबाट १६ हजार ४ सय ९६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ३ लाख ७८ हजार २ सय ८७ जना संक्रमित भएका छन्। जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांक अनुसार उपचारपछि निको भएर एक लाख ९ सय ५८ जना घर फर्केका छन्।
उपचार पनि निको हुने बिरामीको संख्यामा चीन पहिलो नम्वरमा छ। चीनमा ५९ हजार ८ सय ८२ जना निको भएर घर फर्केका छन्। त्यस्तै इरानमा ८ हजार ३ सय ७६ जनाको उपचार भएको छ। इटालीमा ७ हजार ४ सय ३२ जना निको भएको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । (एजेन्सी)
‘बिग बस १४’ को तयारी, सलमान खानको पारिश्रमिक बढ्यो